Amazambane e cream sauce nge amakhowe - ngisho nje kusukela ukuphinyiselwa le nkulumo evela ngazo umlomo, njengoba besho, drools. Ukhilimu omuncu amazambane unezela hhayi kuphela ukunambitheka, kodwa futhi kwenza kube ithenda, encibilika emlonyeni wakho. Amazambane ukhilimu omuncu kungenziwa ethosiwe, sikadali, amakhekhe. Ukuze-ke ungakwazi ukwengeza amakhowe, inyama, emakha, imifino. Futhi isithako ngamunye unika ukunambitheka olukhethekile isidlo.
Ukulungiselela of amazambane athosiwe ukhilimu omuncu nhlobo ezahlukene kusukela ezejwayelekile ukuthosa amazambane. 7-8 kumele amazambane 50 g fat, onion, 300 g ukhilimu omuncu, usawoti, izinongo. Amazambane zigezwe, wageza futhi sibe yimichilo. Salo wagqoka hot uyithose pan futhi ukufuthelana nge kuze kube wokuqhuma, khona-ke lasakazekela amazambane. Nokho, kusasele imizuzu embalwa ngaphambi kokuba ukulungele ukulala anyanisi, amazambane, okuxubile bese wengeza ukhilimu omuncu, shiya on ukushisa imizuzu 5 bese ususa emlilweni.
Ibila amazambane e cream sauce ngisho lula. Okokuqala, kubalulekile ukuba ubilise, kungani uthathe yizicucu amancane, amboze ukhilimu omuncu futhi ubeke sikadali on ukushisa low cishe 15 minut.Kartoshka e cream sauce nge amakhowe - kuba okumnandi kakhulu, inhlanganisela zakudala njalo kuholela yalokho enkulu. Yingakho le nhlanganisela iyathandwa emhlabeni wonke.
Amazambane e cream sauce nge amakhowe sikadali - lena isidlo esikhulu dinner umndeni. Okokuqala udinga ukuhlanza, usike bese efakwa ukubilisa 2 kg amazambane. Ngenkathi amazambane ukupheka, ukuwasha noku-amaqhafuqhafu usike amakhowe, anyanisi Imi ku izindandatho uhhafu futhi konke lokhu ku-epanini gazinga. Bese wengeza usawoti, ufafaze pepper kanye nezinye izinongo. Ngemva kwalokho, isikhunta yengezwe ukhilimu omuncu.
Lapho Dowar amazambane, kubalulekile sokukhipha, cishe isigamu emanzini, enezele futhi amakhowe ethosiwe ukhilimu omuncu. Hlanganisa amazambane nge amakhowe, ikhava bese efakwa sikadali imizuzu engu-15 on ukushisa low.
Kungonakalisa isidlo efana namazambane e cream sauce nge amakhowe futhi iyiphi inyama. Ngezansi iresiphi for amazambane, ithoswe yathamba yenkukhu kanye amakhowe. 6 amazambane aphakathi uthathe cubes kanye gazinga epanini ukuthosa kuze kuphekwe, ungakhohlwa engeza usawoti kanye pepper amazambane phakathi ukupheka. Endaweni ehlukile, gazinga oqoshiwe inkukhu inyama anyanisi kanye amakhowe. Ngaphambi kalula inyama kanye amakhowe wathela ukhilimu uhlanganise. It uhlala kuphela uhlanganise amazambane nge inkukhu kanye amakhowe uphake.
Kodwa kungcono zonke izindlela nokudla amazambane, kodwa kungase futhi ukubhaka. Amazambane kuhhavini ukhilimu omuncu - isidlo engengaphansi okwandile.
Kuyadingeka ukuba uthathe tincetu 700 g amazambane, kugeze futhi ushiye ukuze ome. Khona-ke kudingeka babeka amazambane epanini bese Fry eshukumisayo ngobumnene hhayi njalo futhi, kuze kube amazambane bancane. Emva kwalokho amazambane kunezelwa ambalwa ochotshoziwe ugarliki bese uthele 300 ml amafutha ukhilimu omuncu.
Ngaphandle nje kokuthi amazambane athosiwe amaqhafuqhafu oqoshiwe amakhowe. Bese wengeza amakhowe kuya amazambane ufafaze parsley zonke. Nalapha futhi, bonke izithako ethosiwe bese ngalowo ikhanzi ibekwe endaweni kuhhavini osuke usushisa kakade imizuzu 20. Ngo nje imizuzu embalwa kuze amazambane kuphekwe ungakwazi ufafaze ushizi.
Amazambane e cream sauce nge amakhowe - lena okumnandi. Kodwa ungakwazi kubangele amazambane futhi akukho amakhowe, kodwa inyama. Ngenxa yalesi, kuqala ku isikhunta bayobhaka noma yokuwugazinga pan ibekwe phezu ucwecwe phansi futhi nivame ngamafutha. Khona-ke ukusakaza 300 g inkukhu, oqoshiwe zibe yizicucu amancane kanye oqoshiwe onion semicircles wafafaza izinongo. Isendlalelo esilandelayo mncane amapulasitiki ukusabalala amazambane oqoshiwe (tuber 7). Khona-ke le amazambane bazithela ukhilimu, exutshwe powder lwesinaphi nosawoti. Phezu kwakho konke abafafazwe ushizi vukuza. It uhlala kuphela ukubeka kuhovini baking imizuzu engu-40 ngesikhathi 175 degrees.
Ngemva kwalokho, Baking asuswe kuhhavini, uthathe izingxenye futhi wondla ungene etafuleni, zokuhlobisa amakhambi.
Kungani owesifazane omncane ekhala ebuthongweni bakhe?